Ri’ dhali wayday iyo Wasaaradda Xannaanada Xoolaha oo ku jawaabtay in aysan lahayn qalab iyo goob lagu daweeyo toona (daawo) – Radio Daljir
Abriil 24, 2019 8:23 b 0
Neef ri’ ah ayaa ku dhali wayday magaalada Bosaso, kaddibna markii aan la xiriirnay Wasaaradda Xannanada Xoolaha Puntland, xafiiskeeda Bosaso, waxa ay ku jawaabeen in aysan haysan qalab iyo goob loogu talagalay midna in xoolaha lagu daweeyo.
Xoolaha ayaa Soomaaliya laf dhabar u ah dhanka nolosha iyo dhaqaalaha, waxaana lagu tilmaaamaa isha koowaad ee dhaqaale.
Haddaba helid la’aan daryeel xoolaha nool ee shacabka Puntland dhaqdaan maxaa lagu tilmaami karaa? Maxaa se ku dhacay wasaaradda shaqadaas ku magacaaban oo aanba warba u hayn baahida taagan? Ogoow wasaaraddan ku magacaaban xannaanada xoolaha Puntland waxa ay shaqaynaysay in ka badan 21 sano iyo tan iyo dhidibkii Puntland.
Tan kale, ma la dhihi karaa arrinkan maanta Bossaso ka dhacay waxa uu tusaale u yahay dhibka maanta ka taagan Soomaaliya oo saldhigiisu yahay in dadkii aqoonta u lahaa hawl walba oo taagan aan door laga siin, lala socodsiin, lagalana tashan dhidbidda iyo socodsiinta hawlaha dowlo iyo hagidda bulsho toona?
Mohamoud Abdi Ibrahim iyo Ahmed Shiikh Maxamed Tallman ayaa warkaan la socday oo ka waraystay hooyada neefkan dhaqanaysay oo markii dambe iskeed u gowracday neefkii oo u baahnaa in la kala badbaadiyo.
Maqaalo Kale 302 Wararka 20756